२ लाख मूल्यमा पाइने उत्कृष्ट ३ मोटरसाइकल, तपाईको रोजाईमा कुन ?
6:15 am, बुधबार, माघ ८, २०७६
काठमाडौं । मोटरसाइकल नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुने सवारीसाधन हो । त्यसमा पनि विभिन्न सेग्मेन्ट बनाएर यी मोटरसाइकलहरुको बिक्री हुँदै आएको छ । अहिले बजारमा १२५ सीसी क्षमताका मोटरसाइकल विशेषत माइलेजको लागि गरिद गर्ने गरिन्छ ।
उत्कृष्ट माइलेज र कम सीसीका मोटरसाइकलले विशेष गरेर शहरी र तराईका जिल्लाहरुमा निकै राम्रो बजार पाइरहेका छन् । १२५ सीसीमा कम पावर क्षमताको कारण धेरै पहाडी क्षेत्रमा भने १५० सीसी क्षमताभन्दा माथिका मोटरसाइकल प्रयोग हुने गरेका छन् ।
यस्तोमा नेपाली बजारमा होन्डा, हिरो, टीभीएस, यामाहा, बजाज जस्ता कम्पनीले १२५ सीसी क्षमताका मोटरसाइकल बिक्री गर्दै आएको भएपनि यो सेग्मेन्टमा सबैभन्दा ठूलो बजार हिस्सा होन्डा साइनले ओगटेको छ । त्यसपछि हिरो स्प्लेन्डर र टीभीएस स्ट्राइकर पनि चर्चामा रहेका मोडल हुन् ।
होन्डा सिबी साइन
होन्डाको चर्चित मोटरसाइकल मध्येको एक सिबी साइन नेपाली बजारमा १२५ सीसी सेग्मेन्टमा सर्वाधिक बिक्री हुने मोटरसाइकल हो । यसमा कम्पनीले १२४.७ सीसी क्षमताको इन्जिन दिएको छ ।
यसमा दिइएको इन्जिनले ७५०० आरपीएममा अधिकता १०.५६ बीएच पावर प्रदान गर्ने छ भने ५५०० आरपीएममा १०.३० एनएम टर्क प्रदान गर्छ । यसमा १०.५ लिटर क्षमताको इन्धन ट्याङ्क दिइएको छ ।
मोटरसाइकललाई आरामदायी बनाउन अगाडि टेलिस्कोपिक र पछाडि स्पीङ लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेन्सन दिइएको छ । स्याकार कम्पनीले नेपाली बजारमा बिक्री गर्दै आएको होन्डा सिबी साइनको सुरुवाति मूल्य २ लाख ८ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ ।
टीभीएस स्ट्राइकर पनि नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुने १२५ सीसी सेग्मेन्टको मोटरसाइकलमा पर्छ । जगदम्बा मोटर्सले नेपालमा बिक्री वितरण गर्दै आएको यो मोटरसाइकलको मूल्य १ लाख ९४ हजार ९०० रुपैयाँ मूल्य तोकेर बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
१२५ सीसी क्षमताको इन्जिन रहेको मोटरसाइकल उत्कृष्ट माइलेज दिने मध्यको एक हो । यसमा रहेको इन्जिनले ८००० आरपीएममा ११ बीएच पावर र ५५०० आरपीएममा १०.८ एनएम टर्क प्रदान गर्नेछ ।
यी ३ मोडलका अलावा यामाहा सलुटो, बजाज डिस्कभर जस्ता मोडलपनि नेपाली बजारमा राम्रो बिक्री हुने १२५ सीसी सेग्मेन्टका मोटरसाइकल हुन् ।
हिरो सुपर स्प्लेन्डर १२५
हिरोको आधिकारीक वितरक एनजीएमले नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको स्प्लेन्डर विभिन्न इन्जिन अप्सनमा उपलब्ध रहेको छ । १२५ सीसी क्षमताको हिरो सुपर स्प्लेन्डरमा १२४.७ सीसी क्षमताको इन्जिन दिइएको छ ।
यसमा रहेको इन्जिनले ७००० आरपीएममा ९ बीएच पावर र ४००० हजार आरपीएममा १०.३५ एनएम टर्क प्रदान गर्नेछ । यो मोटरसाइकलमा अगाडि टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक र पछाडि र्याकटेङ्गुलर स्विङ आर्म सस्पेनसन दिइएको छ । आई स्मार्ट टेक्नोलोजी युक्त यो मोटरसाइकलको मूल्य १ लाख ९० हजार ५०० रुपैयाँ रहेको छ ।
नयाँ रेनो डस्टरको नेपालमा बिक्री सुरु, यस्तो छ मूल्य
पहिलेभन्दा कम मूल्यमा आयो मारुती सुजुकी भिटारा ब्रेजा
इलेक्ट्रीक कार किन चढ्ने ? यी हुन् मुख्य ५ फाइदा
काठमाडौंका सडकमा ‘इन्टिलिजेन्ट ट्राफिक सिस्टम’ जडान हुने
यस्ता छन् २०२० मा नेपाल आउने संभावित नयाँ मोटरसाइकल
लाइसेन्स प्रिन्ट भएर थुप्रियो, लिन जाँदैनन् सेवाग्राही
यी ३ कारण निजी गाडी बिक्री हुनै छाडे
हिरोले ल्यायो १६० सीसीको नयाँ मोटरसाइकल (फोटो फिचरसहित)
यस्तो छ हिरोको एक्सपल्स २०० र्‍याली किट भर्सन
नयाँ इन्जिनमा नेपाल आयो इकोस्पोर्ट, यस्तो छ मूल्य
हुन्डाईले ल्यायो ‘स्प्रीङ डिलाइट’ योजना, यस्ता छन् अफर
इलेक्ट्रीक कारको बजार परिवर्तन गर्न सक्ने तीन नयाँ कार नेपाल आउँदै
सार्वजनिक हुँदै नयाँ जेनेरेशन महिन्द्रा थार
नयाँ जेनेरेशन मारुती सुजुकी ‘सेलेरियो’ १.२ लिटर इन्जिनमा आउने
हिरो एक्सपल्सको इन्जिनमा परिमार्जन, पर्फमेन्स अझै राम्रो हुने
125 cc motorcycle